/Blog/Gallery/Izibuyekezo ze-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)
Posted on 01 / 08 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Akumangalisi ukuthi ukwakha umzimba kungenye yezinto ezinzima kunazo zonke umuntu angazibandakanya naye. Kodwa-ke, uma kwenziwa kahle ngemikhiqizo efanele, ukuqeqeshwa, nokudla, kuvuza owodwa ngezigaba ezimbili. Eqinisweni, ukuphakamisa izisindo nokuqeqeshwa yedwa kungase kungakunikeli imiphumela yakho ekahle njengabantu abaningi abavame ukucabanga. I-Oxymetholone (Anadrol) ingenye yemikhiqizo ongayisebenzisa ukuguqula uhambo lwakho lokuqinisa umzimba okwenza kube nakho okwanelisa kakhulu empilweni yakho.
Enye into yokuthi njengoba ukhula, ukukhiqizwa kwama-hormone omzimba njengo-Testosterone kunciphisa futhi usuke ushiywa ngokukhetha ngokuya ngenguqulo yokwenziwa kwayo.I-Anadrol isebenza njengoTesttosterone emzimbeni futhi amathuba okuletha izinzuzo eziningi kunalokho okwedlule. Akukona nje ukukwenza ubone intuthuko emzimbeni wakho kodwa okubaluleke nakakhulu kuyokwenza ukunqoba noma yikuphi amapuleti angokwenyama angase abe yinselele kulolu hambo.
Uma ucabangela ukuphila ngendlela ejabulisayo yokuphila komzimba, kufanele uthathe u-Anadrol ngoba kuzokusiza kakhulu ukuba ukwandise ubukhulu bemisipha yakho namandla. Ngalokhu ungase ufune ukwazi okwengeziwe ngo-Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Uzothola lonke ulwazi mayelana nalo ngomzuzu.
Iyini i-Oxymetholone (i-Anadrol)?
I-Oxymetholone yigama le-Anadrol 50 ebizwa ngokuthi i-anabolic androgenic steroid eyaziwa kakhulu. Uzibuza ukuthi "i-50" isho ukuthini? Kubonisa i-milligram ukuthi le steroid ivuliwe. Nazi ezinye zamanye amagama we-Anadrol;
Ezinkampanini ze-1960 ezinye izinkampani zokwelapha zakha i-Anadrol. Lezi zinkampani zihlanganisa iZoltan, iStetex, nePark Davis. Esikhathini esedlule, sisetshenziselwa ekwandiseni ukukhiqizwa kwamaseli abomvu ebomvu kubantu abahlukunyezwa yi-anemia. Kwakusetshenziselwa ukwandisa ukudla, ukusiza ekuqiniseni amathambo nokulwa nokuhlukumeza imisipha. Ucwaningo olwenziwe ngalezo zinsuku ezigulini ezinesifo sengculazi ngamasonto amathathu futhi imizimba yazo eyayidabula ukuxotshwa kwemisipha yabonisa ukuthi le steroid yabasiza ukuba bathole ama-kilogram ayisishiyagalombili ekupheleni kwesikhathi sokutadisha.
Kwathi emva kwalokho abantu baqaphela ukuthi kungasetshenziselwa izinhloso zokwakha umzimba. Abakhi bomzimba baqala ukuyisebenzisa ukuze bafinyelele umthamo omkhulu wemisipha. Namuhla i-Oxymetholone (i-Anadrol) (I-CAS 434-07-1) kubhekwa njengenye ye-anabolic steroids yomlomo oqine kakhulu emakethe. Akumangazi ukuthi kungasiza umuntu ukwakha imisipha emibili ngokusheshisa njengoba amanye ama-steroids angakwazi. I-anabolic yayo ye-androgenic ratio yi-350: 55. Noma yimuphi umakhi womzimba owusebenzise angafakazela ukuthi le steroid iningi futhi i-androgenic kunalokho okuyizibalo.
Enye into eyenza i-steroid evamile phakathi kwabantu abaningi iwukuthi ingathathwa ngomlomo. Kungenxa yokuthi i-17aa steroid ukusho ukuthi ishintshiwe ngendlela yayo ku-17 yayoth i-athomu manje ingathathwa ngomlomo.
I-Oxymetholone iyi-steroid e-anabolic esebenzayo kakhulu esebenza kahle ukuthi lesi sidakamizwa sinqotshwa izikhathi ezintathu kune-testosterone. Yini ongayifuna enye i-steroid ya-anabolic?
Indlela ye-Oxymetholone (Anadrol) yesenzo
I-Oxymetholone iyisakhi esivela ku-testosterone esine-anabolic ephezulu kumsebenzi we-androgenic. Isebenza ngokubopha nge-cytoplasmic testosterone receptors ezinhlotsheni kanye nezitho ezingenayo i-androgen esabela ukwakha i-hormone-receptor complex. I-hormone-receptor complex then ibopha nge-DNA ngaleyo ndlela ikhuthaza ukuguqulwa kwe-DNA kanye nokubunjwa kwe-mRNA okushintsha ukuqala kwamaprotheni.
Ukwengeza, i-Oxymetholone isebenza ngomphumela we-anabolic emisipha yamathambo kanye namasipha ngenkathi iqhuma i-erythropoiesis. Futhi, lesi sidakamizwa senza isenzo semithi emzimbeni ngokukhulisa amazinga e-erythropoietin esiza ukukhiqiza amaseli abomvu egazi. Ibuye ikhulise ukulinganisela kwe-nitrogen emzimbeni kanye nokugqugquzelwa kokugcinwa kwamanzi.
Iyini i-Oxymetholone esetshenziselwa ukwakha umzimba?
I-Oxymetholone inezinzuzo eziningi zokwakha umzimba eziletha etafuleni. Nazi ezinye zazo;
Ithuthukisa amaprotheni synthesis- Ukukhula kwemisipha kubangelwa amaprotheni ngoba isakhiwo esikhulu esakhiweni emzimbeni. Uma usuqedile kukhona ukuphazamiseka kwamaprotheni okuphazamisa ukukhula komzimba. Ukuze ubukhulu bemisipha yakho banda, umzimba kufanele ube neprotheyini engaphezulu kunokwehla kwawo, futhi ngo-Oxymetholone ukukhuthaza amaprotheni synthesis, kukhona ukudalwa kwemisipha emikhulu.
Ikhulisa ukwenziwa kwamaseli abomvu egazi- Amangqamuzana egazi abomvu aqinisekisa ukuthi imisipha yakho i-oxygenated kahle ngakho-ke lokhu kugcina ukhathele. Ngakho-ke, uzokwazi ukwenza imisebenzi engcono ngaphandle kokukhathala ngokweqile ngaleyo ndlela kube nemisipha engcono. Umakhi womzimba uzuza ngokukhuthazela okwandisiwe ngoba angakwazi ukuqeqesha kanzima phakathi nesonto.
I-Anadrol ithuthukisa ukugcinwa kwe-nitrogen- Le steroid ingakhuphula inani le-nitrogen ukuthi imizimba yakho ingagcina. Inzuzo ngalokhu ukuthi izakhi eziningi izothola imisipha yakho ngaleyo ndlela eholela ekukhuleni kwabo nasekutholeni okungcono emva kokusebenza.
Igcina imisipha ngenkathi inquma- Akekho ofuna ukulahlekelwa imisipha abayisebenzele ngesikhathi sesigaba sokusika. Lokho u-Anadrol akwenza ukuthi ukuhlasela nokubhubhisa amaseli omzimba omzimba ngaphandle kokubhubhisa imisipha. Uma amafutha azungeze imisipha aphukile phansi imisipha manje izobonakala ibheke futhi incike. Ukubukeka okunzima nakakhulu kuncike I-Oxymetholone (I-Anadrol) i-434-07-1.
Kukhuthaza ukudla-Umakhi womzimba kudingeka athathe amakholori amaningi ukuze umzimba ukwazi ukwakha imisipha. Kodwa inkinga ifika lapho umuntu ehlushwa ukungabi nesifiso sokuthatha amakholori adingekayo. U-Oxymetholone uzokunika ukudla okwanele okuzokwenza ngcono ama-calories akho okufakwayo.
Ukwandisa umthamo wamandla- I-Anadrol izokwandisa amandla akho, inzuzo ekhethekile kakhulu kuma-weightlifters.
Ngokuphawulekayo kuholela ekwandeni kwamandla omzimba- I-Oxymetholone ithuthukisa amandla futhi uma ufuna okuthile okuzokusiza ukuba uqhube ngaphezulu nehlombe cindezela kakhulu nakanjani endleleni efanele. Ukuhamba ngokubuyekezwa kwayo, lesi sidakamizwa kubikwa ukuthi senze amandla angaphezu kwamandla phezu kokusetshenziswa kwayo.
Ukugqugquzela kakhulu ukukhula komzimba- Abaningi bezimpawu zomzimba baye bazama ukuthola imisipha engafanele. Nge I-Oxymetholone, akudingeki uzame kanzima. Uma uqala ukuphuma lezi philisi, ungalindela ukuthola imisipha ezinyangeni ezingaphansi kwezinyanga ezimbili. Ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa lesi sidakamizwa ukuthi akudingeki ukuba ulinde isikhathi eside ukuze uqale uqaphele ukuthi imisipha yakho ikhula. Ngesonto lesibili, uzokwazi ukubona umehluko.
Isheshayo isenzo ngakho-ke ishesha imiphumela- Uma ungalungile ukuba nesineke, uzobonga ukuthi le steroid inikeza imiphumela ephelele esikhathini esifushane. Kuzoveza ukuthi ungumzimba wakho okukuvumela ukuthi ufeze imigomo yakho yomzimba emavikini angaphansi kuka-8.
Ithuthukisa ukusebenza-Ngaphandle kokumisa imisipha, u-Anadrol unikeza amandla amakhulu ekusebenzeni. Ngenxa yalokho, izakhi zomzimba kanye nabagijimi bangaphinde baphume ngokushesha kusukela ekufundiseni. Ngenxa yalokho, bangaqeqesha kanzima futhi ngisho nangokwengeziwe.
Usiza ekuzuzeni isisindo- Uma ufuna ukwenza umzimba wakho ubukeke ugcwele futhi umxhwele nakakhulu ngakho kufanele ucabange ukusebenzisa I-Oxymetholone yokuthola isisindo. Abantu abaningi abayisebenzisile babike ukuthi kubasizile ukuthi bathole inzuzo yokuzumayo ngokuzumayo. Ukubeka amakhilogremu angu-20-30 phakathi kwamaviki angu-4-6 akuyona ihlaya, futhi u-Anadrol uye wangenisa ukuletha okuningi kunalokho.
Ukwandisa amandla- Ukukwazi ukungena emisebenzini yakho yokuzivocavoca noma yokuqeqesha isikhathi eside kakhulu yinto into eyenziwa ngumuntu ngamunye. Enye ye-Oxymetholone imiphumela ukuthi iphakamisa amandla akho okuvumela ukuthi uqeqeshe umzimba wakho uma nje ufuna ukuholela ekugcineni komzimba omkhulu.
Ikhuthaza izinhlungu ezihlangene- Lezi zinhlungu zingenza umuntu azonde ukusebenza futhi nakuba u-Anadrol eyaziwa ukudala ubunzima bamasipha kanye namandla, futhi udlala indima ebalulekile ekunikezeni amalunga ukuzwa okuhlanjululwe ngaleyo ndlela ukunciphisa ubuhlungu obuhlangene. Ngeke usenaso isizathu sokuthi ungaphakamisi izisindo njengokuvamile njengoba uthanda.
Isilinganiso se-Oxymetholone (Anadrol)
Ukuthatha nje u-Anadrol 50 akuqinisekisi ngemiphumela emihle. Udinga ukuthatha isilinganiso esifanele uma ufuna ukuthola imiphumela emihle. Ngaphandle kwalokho, ukuthatha isilinganiso esifanele kukuvikela emiphumeleni engase ibe khona ehlobene nokuthatha okungalungile Isilinganiso se-Anadrol. Noma kunjalo, umthamo we-Anadrol uhluka kusuka komunye nomunye kuye kuye ngezinhloso zomuntu.
Ngokungafani nesilinganiso esithile se-supplement lapho inani ozithathayo lishintsha khona ngezigaba ezahlukene zomjikelezo, i-Anadrol inesilinganiso esilinganiselwe se-50mg nsuku zonke. Abaqalayo bangase baqale ngomthamo ophansi njengo-25mg-50mg, futhi uma imizimba yabo ingakwazi ukubekezelela lesi sidakamizwa, manje bangakwazi ukwandisa ukungenisa.
Abantu abaningi bathambekele ekudleni ngokweqile kulo muthi becabanga ukuthi kuzokwandisa ukudla kwabo ngisho nangaphezulu. Noma kunjalo, lokhu akunjalo ngo-Anadrol. Isebenza ngokuphindaphindiwe ngoba inqabela ukudla komuntu kanye okuthathwe ngokweqile. Futhi, kunconywa ukuba umuntu angathathi isilinganiso esiphezulu salesi sidakamizwa ngoba singabangela imiphumela emibi kakhulu.
Uma ufuna ukuxuba kancane, ungandisa inani lakho ku-100mgs. Kodwa kunelulekwa ukuthi wenza lokhu kuphela uma umzimba wakho ungakubekezelela. Ungenzi iphutha lokudlula i-150mgs ngoba lokhu ngeke kube kuhle kwesibindi sakho. Kungabangela nokunciphisa izinkanuko zakho, futhi lokho kusho ukuthi awukwazi ukudla njengoba ujwayele ukuvimbela ukuthuthukiswa kwakho.
Umjikelezo we-Oxymetholone (Anadrol) kanye nokubeka
Umjikelezo we-Oxymetholone (Anadrol)
Abaningi bomzimba balithanda ukusebenzisa u-Anadrol emjikelezweni wabo ngenhloso yokuthuthukisa ukusebenza kwabo. Nakhu eminye yemijikelezo iningi labo elikhethayo;
Kuthatha amasonto ayishumi nambili.
Iviki 1 ngesonto 6- Thatha i-25-50mg ye-Anadrol nsuku zonke
Iviki le-1 kuya kwesonto 12- Thatha i-300-500mg ye-Testosterone i-Enanthate ngesonto.
Lokhu kungenye yemijikelezo ka-Anadrol enokuqala lapho i-Testosterone iyingxenye yalo kanye nomthamo ophezulu ozokwenza umphumela we-anabolic odingekayo. Ngakolunye uhlangothi, u-Anadrol usemthamo ojwayelekile ukuthi umqashi uqondiswe ukuthatha.
Ngenkathi kulo mjikelezo, kunconywa ukuthi uthathe i-SERM efana no-Nolvadex noma i-aromatase inhibitor ngenxa yemvelo ephezulu ye-estrogen ukuthi le stack inayo. Kulabo abaqalayo abafuna ukuphakama, lokhu kungcono umjikelezo we-Anadrol ukuya kuwo.
I-2. Kubasebenzisi abaphakathi
Iviki1 kwesonto 6- Thatha i-50mg ye-Anadrol nsuku zonke.
Iviki1 ngesonto 12- Thatha i-400mg ye-Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) masonto onke.
Futhi, thatha i-100mg I-testosterone i-Enanthate masonto onke.
Njengoba uqaphele, kunezinguquko ezimbalwa kulo mjikelezo uma kuqhathaniswa neyokuqala. Lo mjikelezo awunayo i-anabolic eyinhloko, futhi injongo eyinhloko yalokhu ukunciphisa ukwanda komsebenzi we-estrogen kulo lonke umjikelezo ngenkathi usebenzisa umuthi onjengo-Anadrol.
I-Deca Durabolin ihamba kahle kulo mjikelezo lapho umuntu evala ukusetshenziswa kuka-Anadrol ngoba iyinhlanganisela ye-anabolic. Kulomjikelezo we-Anadrol, umthamo wayo wehlisiwe usuka kumkhawulo we-50-100 mg nsuku zonke ukuze uthathe kuphela i-50 mg ngosuku. Kungenxa yokuthi le mithi i-anabolic kakhulu. Ngakho-ke, akudingi ukwanda kwesilinganiso se-Anadrol. Ukuze ubukhulu noma amandla athole, isilinganiso se-50mg singaphezu kokwanele kumsebenzisi ophakathi.
I-3. Kubasebenzisi abakhulu
Kuthatha amasonto ayisishiyagalombili.
Iviki 1kuyiviki 8- 100mg kaAnadrol ngosuku
Thatha i-25mg ye-Testosterone Propionate njalo nosuku olulodwa ku-100mg masonto onke
Thatha i-100mg Trenbolone Acetate njalo ngosuku olunye ngolunye u-400mg ngeviki.
Umehluko walo mjikelezo ohamba phambili nabanye ukuthi kuthatha isikhathi esifushane. Iphinde ihilele i-steroids efana nama-short esters afana ne-Trenbolone Acetate ne-Testosterone Propionate. Ukusetshenziswa kwalo kunqunyelwe emavikini ayisithupha, futhi akusiluleka ukuyisebenzisa isikhathi eside kakhulu ngenxa yemithi ephezulu ka-100mg ngosuku.
Ingxenye engcono kakhulu mayelana nomthamo ophezulu we-Anadrol wukuthi unamandla okunikeza amandla amakhulu kanye nokuzuza ngokulinganisa ikakhulukazi uma kuhlanganiswe ne-Trenbolone Acetate.
Lo mjikelezo ukhuthazwa kuphela kubasebenzisi abaphambili ngoba kungabangela ukuthi umuntu athole amandla nesayizi ngokweqile ngakho kudala ukulimala kwabanye abasebenzisi bezinga.
Isitoreji se-Oxymetholone (Anadrol)
I-Anadrol 50 inikeza ukuphikisana okuphezulu njengoba ungakhetha ukuyisebenzisa uqobo noma ukuyibeka ndawonye namanye ama-steroids.
Anadrol umjikelezo kuphela- Ngalo mjikelezo, cishe uzothola imiphumela emihle kakhulu. Ngenkathi ungase uthathe isinqumo sokubeka, kuhle ukukhetha i-steroids oyifaka nayo ukuze ugweme ukwandisa imiphumela emibi. Uma unesithakazelo ekumenikeni ngendlela ephephile, nansi izindlela ongakwenza ngazo;
Sebenzisa ama-anabolic omnene-Ukuhle ukuthi uyifake nge-anabolic steroids emnene njengeSARMS, Equipoise, Primobolan, noD deca Durabolin.
Ungayifaki nge-androgenic steroids ngamanani aphezulu kakhulu-Ngenkathi uyibeka nge-steroids njengo-Testosterone noma i-Trenbolone, kufanele ugweme ukuthatha isilinganiso se-Anadrol esedlula i-200mg.
Gwema ukuyibeka nge-derivatives ye-DHT- Ukweqa i-Anadrol nge-steroids njengo-Masteron no-Winstrol kuyokwenza okubi kakhulu kunokuhle. Ungathola imiphumela oyifunayo, kodwa imiphumela emibi ezayo nayo ayikwazi ukubekezelelwa. Ezimweni lapho abantu abanjwe khona noWinstrol, kwakukhona imibiko yokulahlekelwa izinwele ezinkulu.
Gwema ukuyibeka ngamanye ama-steroids abangela ukulimala esibindi-Gwema ukugxila nge-steroids yomlomo ngoba kungabangela izinkinga zesibindi njenge-jaundice.
Ungabeki isikhathi eside-Ngesikhathi esilinganiselwe sokugubha amaviki amane, kuhle ukuphawula ukuthi isikhathi eside sokusetshenziswa nokuphakama umthamo osithathayo, nemiphumela emibi ibe yinkimbinkimbi.
Ngakho-ke, kufanele uthathe isitaki se-Oxymetholone ngokuhlakanipha ngaphandle kokusebenzisa kabi izidakamizwa.
Ngenxa yokuthi i-Anadrol ingenye ye-anabolic steroid eqinile emakethe, kuhle ukuba nomshini omuhle kakhulu we-post-cycle. Inhloso yalokhu ukukuvumela ukuba ugcine ukuzuza kwakho. Ngeke kube kuhle ukulahlekelwa konke okuzuzile ngemuva komjikelezo, akunjalo? Ukwengeza, i-PCT ikusiza ukuba ugweme imiphumela emibi engabangelwa ukususwa kwe-Testosterone ukukhiqizwa.
Njengoba i-Anadrol inomzuzu omfishane kakhulu futhi i-ester emfushane, kufanele uqale i-PCT yakho izinsuku ezintathu ngemuva kokuthatha umthamo wakho wokugcina uma usebenzisa yona kuphela. Uma ngabe uyibeka nge-steroid ephakathi kwe-ester ende, kufanele uqale izinsuku ze-PCT 14-18 ngemuva kokuthatha isilinganiso sakho sokugcina. I-Nolvadex noma i-Clomid izosiza ukukhahlela kwakho ukukhiqiza kwemvelo ka-testosterone emzimbeni wakho. Nansi indlela yokuthatha izidakamizwa;
Amaviki I-Nolvadex / ngosuku I-Clomid ngosuku
Oxymetholone (Anadrol) imiphumela emibi
The Imiphumela ye-Anadrol zihle, kodwa ngezinye izikhathi zingabhekana nemiphumela emibi engathandeki. Iningi lemiphumela emibi ye-Anadrol iyaphathwa futhi iyodlula uma usuqedile ukuyithatha.
Funa ukunakekelwa udokotela uma uthola noma iyiphi yalezi zibonakaliso ngenxa yokusabela okwenziwe;
Ukuvuvukala komphimbo, ulimi, izindebe, nobuso
Imiphumela emibi ye-Anadrol ebangelwa ukusetshenziswa kwayo yesikhathi eside i-cysts egcwala igazi ephaleni noma esibindi. Kungabangela nezicubu zesibindi.
Shayela udokotela uma unayo yalezi zinto;
I-jaundice-yellowing yamehlo nesikhumba.
Ubuhlungu besisu obuphezulu
Ukuvuvukala kwezinyawo nezandla
Izinguquko kumbala wesikhumba
Ukuvuvukala okubuhlungu emabeleni
Ukweqa (izinsini eziphaphayo noma ukuphuma kwempumu) noma ukuchoboza kalula, ukuphuma ngaphandle kokuma
Isithakazelo esishintshileyo sokuya ocansini, wehlile inani lembewu elikhiqizwa ekujuleni, ukukhathazeka kokuba ne-orgasm kanye nokungabi namandla
Ukuzwa ubuhlungu epeni uma selungiswa
Ukuvuthwa okunzima noma okubuhlungu
Abesifazane abasebenzisa i-Oxymetholone bangase bahlakulele izici zomzimba futhi kufanele-ke bayeke ukusetshenziswa kwazo uma kwenzeka noma befuna iseluleko sikadokotela. Zihlanganisa;
Inzalo eyancipha noma ekhulile kwezocansi
Ukushintsha esikhathini sokuya esikhathini
Ukuqhafaza iphathini lamadoda
Izinwele zobuso ezandayo
Ukukhula kwezinwele esifubeni
Izwi elijulile noma elizwakalayo
Imiphumela emibi ejwayelekile eyenzeka kuzo kokubili abesilisa nabesifazane kuhlanganisa;
Izinkinga zokulala (Ukuqwashisa)
Uzizwa ujabule noma ungahlali
Ukuvuvukala kwebele kanye nokuzwela (kokubili amadoda nabesifazane)
Ingabe i-Oxymetholone (i-Anadrol) iphephile ukuthatha?
Ingabe i-Anadrol iphephile? Lo mbuzo ubeka ingqondo yabantu abaningi abanesithakazelo sokuthatha lesi sidakamizwa. I-Anadrol 50 iphephile uma ithathwa ngendlela efanele, kodwa kungenzeka ukuthi awunayo uma uhlangabezana nanoma yiziphi izimo ezilandelayo;
Uma ukhona noma yiziphi izidakamizwa ezinciphisa igazi ezifana noJantoven, Coumadin, Warfarin
Ukuphuza noma ukuphazamiseka kwegazi
I-cholesterol ephakeme noma i-triglycerides
Isifo se-artery Coronary
Isifo senhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo ukuphefumula
Isifo noma isifo sezinso
Umdlavuza webele wesifazane unamakhalisi amaningi egazini
Umdlavuza webele wesilisa
I-Anadrol ayiphephile kuwe uma ukhulelwe. Kungabangela ukulimala ingane yakho engakazalwa futhi kuholele naseziphambekweni zokuzalwa. Uma kwenzeka ukhulelwa ngenkathi usebenzisa lesi sidakamizwa, bheka udokotela ngokushesha. Ubuye weluleke ukusebenzisa indlela ephumelelayo yokulawulwa kokuzalwa ngenkathi usebenzisa le mithi.
Le mithi ingashintsha ukuzala kokubili abesifazane nabesilisa ngakho-ke kufanele ilandelwe ngokucophelela okukhulu.
Izifundo ukuthi ngabe zidluliselwa kumntwana wokuncelisa ingane ngokusebenzisa ubisi lwebele azikaze zenziwe, futhi aziwa ukuthi zingabangela yini ukulimala. Ngesikhathi usebenzisa le mithi gwema ukuncelisa ingane yakho.
Abantu abangaphansi kweminyaka eyisishiyagalombili ubudala akufanele basebenzise le mithi ngoba kungathinta ukuthuthukiswa kwamathambo abo.
Thenga Anadrol kusuka kusayithi lethu bese sithola. Nansi indlela oyala ngayo kithi;
Ungaxhumana nathi ngokusebenzisa i-imeyili yethu, ummeleli wezinkonzo zamakhasimende, i-Skype e-intanethi noma ngokusebenzisa uhlelo lwethu lokuphenya nge-imeyli.
Ukuze usenze sikwazi ukukukhonza kangcono, sinikeze lonke ulwazi oludingekile mayelana ne-oda, okusho, ikheli lakho kanye nenani ofuna ukuyithenga.
Ummeleli wethu wezinkonzo zamakhasimende uzobuyela kuwe futhi akunike izindlela zokulethwa, usuku lokufika olulinganisiwe (i-ETA), inombolo yokulandelela, ukucaphuna kanye nemigomo yokukhokha evumelana kakhulu.
Uma usukhokhele i-oda lakho, izimpahla zithunyelwa kuwe zingakapheli amahora ayishumi nambili alandelayo (Lokhu kunoma iyiphi i-oda elingaphezu kwama-kilogram ayishumi).
Ingabe i-Oxymetholone (i-Anadrol) engekho emthethweni?
Ukusemthethweni kokusebenzisa, ukuthengisa nokuthenga i-Oxymetholone kuyahlukahluka ezweni lonke. Ngokwesibonelo, e-UK, Canada, nase-US ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kuvunyelwe, kodwa ukuhweba okungemthetho kuvunyelwe. Ukuze ugweme ukuthola izinkinga, hlola uma izwe lakho livumela ukusetshenziswa kwe-Anadrol.
Emazweni amaningi, ungawuthola kuphela ngomshwalense kodwa ukugwema ukuhlupheka ungayithola kuyi-intanethi.
Ngingawuthola kuphi i-Oxymetholone (i-Anadrol)?
Njengoba uzibandakanya sawo esiningi, ungathola ukuthi izinga lokukhula kwemisipha yakho alineliseki. Ngisho nangemva kokwenza konke ongakwenza, ungase uphazamiseke ukuqaphela ukuthi awufikeli lapho ufuna khona. Ngezinye izikhathi, ungase ubone ukuthi kunamafutha amaningi akha emzimbeni wakho. Amafutha anjalo azofihla imisipha yakho, futhi ungase uzithole uqala ukubuka yonke into.
Uma usesimweni esinjalo, ungagxiliwe uzibuze ukuthi yikuphi okulandelayo. Izinsuku lapho kwadingeka ubuze wonke umuntu ejimini ukuze uthole indlela yokwakha imisipha yakho sekuphele isikhathi eside. Namuhla, usakaza phezu kwe-inthanethi, futhi ungathola wonke amasayithi athengisa i-steroids ku-intanethi. Kodwa wazi kanjani indawo engcono kakhulu yokuthenga kuyo?
Njenganoma iyiphi i-steroid oyithenga, kubalulekile ukuthi uthenge i-Anadrol 50 emthonjeni onokwethenjelwa. Lapho ungaqiniseka ukuthi uzothola amanani nekhwalithi engcono kakhulu ye-Oxymetholone. Njengoba i-intanethi inezinhlamba eziningi egameni labathengisi, ungase uwele ezindaweni ezithengisa i-steroid engalungile noma engcolile. Ezinye i-anabolic steroids kungenzeka ukuthi ayinaso isiqiniseko sobuqiniso, futhi zingase ziphethelele ekuthinteni umzimba wakho kabi. I-Oxymetholone yangempela ngaphambi nangemva kwemiphumela ifana nemhlaba emibili, futhi kufanele kube njalo uma uqala ukusebenzisa le steroid.
Esizeni sethu AASraw.com, uzokwazi u-Anadrol ukuthi uhlanzekile futhi uhlanzekile. Intengo yethu ye-oxymetholone i-pocket-friendly, futhi ngegunya layo, uqinisekiswa ngokuthola imiphumela emihle ye-Anadrol nemiphumela emibi ye-Anadrol. Hlela kusuka kithi namuhla futhi uguqule umzimba wakho kulokho okufunayo.
I-Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Ubuhlobo obunamathele obuhlangene be-anabolic-androgenic steroids: ukuqhathanisa ukubophezelwa kwamamukeli we-androgen emisipha yamathambo nasesidongeni se-prostate, kanye ne-glomin-binding globulin". I-endocrinology. 114(6): 2100-6.
I-Pavlatos AM, iFultz O, i-Monberg MJ, i-Vootkur A, i-Pharmd (2001). "Ukubuyekezwa kwe-oxymetholone: ​​i-17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid". I-Clin Ther. 23(6): 789-801.
UZderic, uJohn A .; I-Carpio, i-Humberto; Ringold, HJ (uJanuwari 1959). "I-Steroids. I-CVI. Ukwenziwa kwe-7β-Methyl Hormone Analogs ". I-Journal ye-American Chemical Society. 81(2): 432-436.
Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Dianabol Powder Ukudayiswa Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol Okudingeka Uyazi Ngaphambi Kokuthenga i-Winstrol Online